हेल्दी डेटोक्स ड्रि:: यी चीजहरूसहित स्वस्थ पेय बनाउनुहोस्, बिहान खाली पेटमा पिउँदा शरीर डिटक्स हुनेछ र प्रतिरक्षा क्षमता बढ्नेछ!
स्वास्थ्य हेल्दी डेटोक्स ड्रि:: यी चीजहरूसहित स्वस्थ पेय बनाउनुहोस्, बिहान खाली पेटमा पिउँदा शरीर डिटक्स हुनेछ र प्रतिरक्षा क्षमता बढ्नेछ!
Nepal Online Patrika: उत्तम डेटोक्स पेय: हामीले समय-समयमा हाम्रो शरीरलाई डिटक्स गर्नुपर्छ। हामीले खाने कुराबाट फोहर निस्कनको लागि हामीले डिटोक्स ड्रिन्क खानु पर्छ। यसका साथ तपाई धेरै समस्याबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै वजन नियन्त्रणमा राख्नु, शरीरलाई डिटोक्स गर्ने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आदि।
प्रतिरक्षा बूस्टि Dr ड्रि:: हामीले समय-समयमा हाम्रो शरीरलाई डिटक्स गर्न आवश्यक छ। हामीले खाने कुराबाट फोहर निस्कनको लागि हामीले डिटोक्स पेय पदार्थ खानु पर्छ। यस संग, तपाईं धेरै रोग बाट राहत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै वजन नियन्त्रणमा राख्नु, शरीर डिटोक्स, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आदि। यदि तपाईं केही स्वस्थ चीजहरूको प्रयोग गरेर डिटक्स पेय बनाउनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंको शरीर केवल डिटोक्स मात्र हुनेछैन तर तपाईं आश्चर्यजनक फाइदाहरू पनि पाउनुहुनेछ। यद्यपि शरीरलाई डिटोक्स गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् (तर शरीरलाई डेटोक्स गर्ने तरीका), तर स्वस्थ डिटोक्स ड्रिन्क्स धेरै किसिमले विशेष र लाभदायक हुन सक्छ। यहाँ तीन चीजहरू छन् जुन डिटोक्स पेयहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उच्च रगतमा चिनी बिरामीहरूले यी things चीजहरू उपभोग गर्न बिर्सदैनन्, मधुमेहमा के खानुहोस् र के नहोस भनेर जान्नुहोस्!
तौल घटाउनुका साथै यो पेयले प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बढावा दिन सक्छ। स्याउ, बीट र गाजरबाट बनेको यो पेय भिटामिन सी मा समृद्ध छ, जो प्रतिरोधक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यसले पाचन सुधार गर्न पनि सक्दछ। यहाँ कसरी स्वस्थ डिटोक्स पेयहरू बनाउने …
बीट, स्याउ र गाजरको साथ डिटक्स पेय बनाउनुहोस्। बीट, स्याउ र गाजरको साथ डेटोक्स पेय बनाउनुहोस् |
यी तीन चीजहरू अर्थात् बीटरूट, स्याउ र गाजर पोषण र एन्टीआक्सीडन्टहरूले भरिएका छन्। यी तीनको विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरू छन्। धेरै अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाए कि बीट फाइटोकेमिकल यौगिकहरूको समृद्ध स्रोत हो, जसमा एस्कोर्बिक एसिड, क्यारोटीनोइड्स, फिनोलिक एसिडहरू र फ्लाभोनोइडहरू समावेश छन्।
स्वस्थ रहनको लागि बिहान सब भन्दा पहिले यी things चीजहरू खानु, मेटाबोलिजम बढाउनेछ र पाचन सुधार हुनेछ!
यस पेयले शरीरलाई डिटोक्स मात्र गर्दैन तर प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गरेर पाचन प्रणाली सुधार गर्न सक्छ। स्याउ भिटामिन, जिंक र अन्य पोषक तत्वहरू र खनिजहरूमा समृद्ध हुन्छन्। उहि समयमा, गाजर भिटामिन ए र ईले भरिएका हुन्छन्, जसमा शरीरका लागि लाभदायक हुने धेरै महत्त्वपूर्ण एन्टिआक्सिडन्ट हुन्छन्। आँखालाई स्वस्थ राख्न गाजरलाई धेरै फाइदाजनक ठानिन्छ। बिहान खाली पेटमा यस पेय पदार्थ सेवन गर्नाले ठूलो फाइदा हुन्छ।
पिस्ता र दूध: एक मुट्ठी पिस्ता दुधमा उमालेर, तपाईंले दैनिक उपभोगका यी benefits लाभहरू पाउनुहुनेछ!
कसरी एक डिटक्स पेय बनाउने कसरी एक डिटॉक्स पेय बनाउने
– एक सानो आकारको बीट
– एक सानो स्याउ
– एक सानो गाजर
– एक लिटर पानी
– यो सबै सानो टुक्रा मा काट्नुहोस्।
यसमा पानी थप्नुहोस् र ब्लेन्डरमा जुस निकाल्नुहोस्।
अब यसलाई फिल्टर गर्नुहोस् र यसलाई बिहान खाली पेटमा पिउनुहोस्।